Anbotek YeMotokari Nyowani Zvishandiso & Zvinoumba Lab ndeyechitatu-bato rabhoritari inonyanya kuongorora inoenderana nemotokari. Tine yakakwana michina yekuyedza, ruzivo rwekugadzira tekinoroji uye ekuyedza zvikwata, uye takazvipira kubatsira makambani ese muindasitiri yemotokari kuvandudza mashandiro uye kudzikisa njodzi, kubva mukugadzirwa kwechigadzirwa, kugadzirwa, kutumirwa kusvika kune-yekutengesa sevhisi, kune ese matekiniki emota indasitiri. cheni. Ipa mhando yekutarisisa paunenge uchipa mhinduro kune dzakasiyana dzinozivikanwa uye dzakavanzika nyaya.
Zvishandiso murabhoritari, mwenje rabhoritari, mechanics rabhoritari, mwoto murabhoritari, kutsungirira rabhoritari, hwema bvunzo kamuri, VOC rabhoritari, atomization rabhoritari.
• Zvemotokari zvinhu: mapurasitiki, rabha, pendi, matepi, furo, machira, dehwe, zvigadzirwa zvesimbi, machira.
• Zvemukati zvemotokari zvikamu: chiridzwa panhare, yepakati koni, musuo trim, kapeti, siringi, mhepo yekuisa mweya, yekuchengetedza bhokisi, musuwo mubato, mbiru trim, mudhiraivho, zuva visor, chigaro.
• Zvemukati zvekunze zvikamu: kumberi nekumashure mabhomba, grille yekudyira mweya, mativi emagetsi, kusimudzira, magirazi ekuona kumashure, mitsetse yekuisa chisimbiso, mapini emuswe, vapambi, maWipers, mafenders, dzimba dzemarambi.
• Zvemagetsi zvemagetsi: mwenje, mota, maair conditioner, maWiper, switch, mamita, marekodhi ekutyaira, akasiyana emagetsi mamodule, masensa, masinki ekupisa, matambo ewiring.
Chinyorwa chekuita bvunzo (epurasitiki Rockwell kuomarara, Mahombekombe kuomarara, tepi kukakavara, mutsetse kupfeka, vhiri kusakara, bhatani hupenyu, tepi yekutanga tack, tepi inobata tack, pendi firimu kukanganisa, kubwinya bvunzo, firimu inochinja, 100 grid bvunzo, kumanikidza seti, penzura kuomarara, kuputira kukora, kudzivirirwa kwepamusoro, vhoriyamu kusagadzikana, kuputira kusagadzikana, kumira voltage), Chiedza bvunzo (xenon mwenje, UV).
• Mechanical zvivakwa: tensile kushushikana, tensile modulus, tensile strain, flexural modulus, simba rinoshanduka, inongotsigirwa danda simba simba, cantilever simba simba, svuura simba, kubvarura simba, tepi peel simba.
• Thermal performance test (yakanyungudika index, mutoro kupisa kutsausa tembiricha, Vicat softening tembiricha).
• Kuomesa kuita bvunzo (mota yemukati kupisa, yakatwasuka yakatwasuka kupisa, yemagetsi leakage yekutevera, bhora kumanikidza bvunzo).
• Auto zvikamu kuneta uye hupenyu bvunzo (dhonza-torsion inoumbwa kuneta bvunzo, mota yemukati yekubata kutsungirira bvunzo, mota mubatanidzwa wemukati switch kutsungirira bvunzo, mota bhuku bhureki rekutsungirira bvunzo, bhatani rehupenyu bvunzo, kuchengetedza bhokisi kutsungirira bvunzo).
• Odor test (kunhuhwirira kwakasimba, hwema hwekunhuhwirira, hwema hwezvinhu).
• VOC bvunzo (aldehydes uye ketoni: formaldehyde, acetaldehyde, acrolein, nezvimwewo; benzene dzakateedzana: benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, styrene, nezvimwewo).
• Kuedzwa kweatomization (gravimetric nzira, gloss nzira, haze nzira).